စာ​မေးပွဲပြီးပြီမို့ အနုပညာ အလုပ်​​တွေ ပြန်​လုပ်​​တော့မယ့်​ယဉ်​လတ်​ – Myanmar Hot News
စာ​မေးပွဲပြီးပြီမို့ အနုပညာ အလုပ်​​တွေ ပြန်​လုပ်​​တော့မယ့်​ယဉ်​လတ်​
အက်​ရှင်​မင်းသမီး​လေးလို့ပရိတ်​သတ်​​တွေအား​ပေးချစမခင်​ရတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး ယဉ်​လတ်​ဟာ လတ်​တ​လောမှာ စာ​မေးပွဲကာလဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ အနုပညာ အလုက်​​တွေကိုမလုပ်​ကိုင်​ဘဲ စာကိုဘဲ အာရုံစိုက်​​နေတာဖြစ်​ပါတယ်​။ယဉ်လတ်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများကိုလည်း ရိုက်ကူးထားသူပါ။ သူမသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဂျင်ပါတီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကလည်း ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ယဉ်လတ် က သူမကျောင်းမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားပါတယ်။ယဉ်လတ်က ” စာမေးပွဲကြီး အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုပြီး . တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဘ၀ မှ အလုပ်ခွင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် ရန် . . . ” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
ကျားကျားလျားလျား​လေးနဲ့လည်း လိုက်​သလို အခုလို မြန်​မာဆန်​ဆန် ​လေးနဲ့လည်းလှတာပါဘဲ။မြန်​မာဝတ်​စုံ​လေးနဲ့ သိမ်​​မွေ နူးညံ့တဲ့ မိနိးကလေးအဖြစ်​နဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေကိုရင်​ခုန်​​စေသူပါဘဲ။ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​ ယဉ်​လတ်​ရဲ့ပုံ​လေး​တွေကိုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။
Source Yin lat
အဖြူ​ရောင်​​လေးနဲ့ အပြစ်​ကင်းစင်​ကာဆယ်​​ကျော်​သက်​​လေး​တွေလိုလှ​နေတဲ့ ချစ်​သု​ဝေ
အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားလေလေ မိသားစုနဲ့ ပို​​မို​နွေး​ထွေး​အောင်​​​ နေထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ နေမျိုးအောင်
စိတ်ချမ်းသာလာရလို့ ၀၀ကစ်ကစ်လေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ အိမ့်ချစ်